♪ တခြားသူမသိ​အောင်​ ဗွီဒီယို ခိုးရိုက်​ချင်​သူများအတွက် - Secret Video Recorder Pro v3.1.6 Apk (12-March) ♫ ~ ဘလော့ခရီးသည်
ဗွီဒီယို ခိုးရိုက်​ချင်​သူများအတွက်​ အသုံးဝင်​တဲ့ Application
တစ်​ခုဖြစ်​တဲ့..."Secret Video Recoder Pro v3.1.6" ကို တင်​​ပေးလိုက်​ပါပြီဗျာ။ ဗီဒီယိုရိုက်တဲ့နေရာမှာ လည်း အရှေ့အနောက်ကင်မရာနှစ်ခုလုံးကနေရိုက်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ Video ရိုက်ချင်တဲ့နေရာမှာ ဖုန်းလေးကိုချိန်ပြီးထားလိုက်ရုံပါပဲ။ ရိုက်ယူမယ့်အချိန်ကိုလည်း Schedule လုပ်ပြီးသတ်မှတ်နိုင်တဲ့အတွက် သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ရောက်ရင်အလိုလျောက်ရိုက်ကူးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ တင်တဲ့သူတော့သိပ်မ ရှိပါဘူး အသုံးတည့်စေမယ့် Application လေးတစ်ခုဖြစ်လို့
ဒေါင်းယူထားစေချင်ပါတယ်ဗျာ။ Android OS 3.0 နှင့် အထက် ဖုန်းများမှာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအောက် မှာဆက်လက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
★ Clean material design. ★ One touch to start/stop recording.
★ Easy to open folder containing recorded videos. ** Step-1.အောက်က Download Button ကိုနှိပ်လိုက်ပါ